Maine Coon | Amakati eNoti
Ukuba ujonge ikati enomtsalane nothando lwasekhaya ekhudlwana kuneYurophu eqhelekileyo kwaye ejongeka njengengonyama encinci, awuceli into engenakwenzeka. Kukho uhlobo oluhlangabezana nayo yonke into oyicelayo, kwaye yikati leyo Maine Coon.
Ngobunzima ukuya kuthi ga kwi-11kg (eyindoda), obu boya buxabisekileyo bunembonakalo eya kwenza ukuba lonke usapho luthandane, nokuba ngabantwana, abantu abadala okanye abantu abadala.
1 Imvelaphi kunye nembali yeMaine Coon
2.1 Imibala yohlanga
2.1.1 Ikhonkco elimnyama
2.1.3 Maine Coon ngwevu
4 Lufuna luphi ukhathalelo?
5 Ixabisa malini i-Maine Coon?
Imvelaphi kunye nembali yeMaine Coon
UMaine Coon, isigebenga seekati, Yinzalelwane yaseMelika, ngokukodwa eMaine. Kodwa inyani kukuba akalazi kakuhle ukuba lithini ibali lakhe, kuba zininzi iingcamango ngalo, ezinye zisengqiqweni kunezinye:
Kukho ilivo elibuyela emva ngo-1793, elithetha ngebali likaCaptain Samuel Clough, inzalelwane yaseWiscasset (Maine), owayethutha umthwalo kaKumkanikazi uMarie Antoinette eSally, apho kwafunyanwa ikati.
Kukho ibali apho kuthiwa iiViking bezizezokuqala ukufika eMelika, kwaye zazikhatshwa ziikati ezazigcina iimpuku.
Eyona ithiyori isengqiqweni ithi, eneneni, ngumnqamlezo phakathi kweekati ezineenwele ezinde (njenge-angora) kunye neekati zasendle zaseMelika.
Nokuba kunjalo, ngo-1953 i-Maine Coon Cat Club yenziwa eMaine, eya kuthi inike ukuthandwa kwenye yeekati ezithandekayo zasekhaya emhlabeni.
Ngokwe-International Feline Federation, umntu ophambili kuthi kufuneka abe:
U bunzima: phakathi kwe-6,8 kunye ne-11kg eyindoda naphakathi kwe-4,5 kunye ne-6,8kg yowasetyhini.
Umzimba: inde kwaye yimisipha egutyungelwe ngeenwele ezimfutshane entloko kodwa zide njengoko zisondela emsileni.
Intloko: phakathi, kunye neentsika ezidumileyo.
Iindlebe: inde kwaye ikhombe.
Amehlo: inkulu kwaye imile okweqanda, nawuphi na umbala ngaphandle kohlaza okwesibhakabhaka ngaphandle kokuba imhlophe iMaine Coon.
Nangona yonke imibala yamkelwe (ngaphandle kwebala lombala, itshokholethi, isinamoni, ililac kunye nefawn) kwiminyaka yakutshanje kukho imfuno yabambalwa ngokukodwa. Kwaye ayisiyongaphantsi: umbala woboya bayo umhle kakhulu, mhle kakhulu. Ngaba zezi:
Umfanekiso - InspirationSeek.com
Ukuba ufuna ukuba ne-panther encinci emnyama eneenwele ezinde, oku ngokuqinisekileyo kuyakuba ngumhlobo wakho omtsha onoboya.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ufuna ukuba ibe noboya obumhlophe qhwa, noboya bakho fur.
Maine Coon ngwevu
Grey ngumbala omhle kakhulu, onika i-feline imbonakalo engaqondakaliyo, ebonakalayo.
I-brindle yeyona ndlela indala. Ingaba yi-grey okanye i-orange brindle.
Olu luhlobo lwekati yaziwa ngokuba yinto ethandekayo kwaye inothando kakhulu. Uyakonwabela ukuhlala nosapho lomntu, nokuba ubukele umabonwakude okanye udlala nje kancinci. Ngale ndlela, ihlala iyikati ezolileyo, nangona inokuba nayo, njengayo nayiphi na intshikazi, "amaxesha obudenge" ngexesha layo iqala ijikeleza indlu okanye idlala ngamanzi.
Kukwakhona, kuhlala kakhulu, kakhulu kangangokuba kulula ukuba imenze ahlalisane nezinye izilwanyana, ezinjengezinja. Kodwa ukuze onwabe, kuya kufuneka afundiswe ukuleash kwaye ukubopha, kuba uyakuthanda ukuphuma ahambe (ewe, uhlala kwiindawo ezizolileyo). Vula Oku kubhaliwe Sichaza indlela yokufumana.
Lufuna luphi ukhathalelo?
IMaine Coon kufuneka ifumane uthotho lokhathalelo lwemihla ngemihla ukuze impilo kunye nolonwabo ziqinisekiswe. Zezi zilandelayo:
Eyona nto icetyiswayo nika ukutya okukwizinga eliphezulu okanye ukhethe ukutya kwendalo okunje ngeYum, iSumum okanye iBarf Diet. Ukuba ukhetha okokugqibela, sikucebisa ukuba ucele uncedo kwisazi sezondlo esikhethekileyo kwisondlo, kuba ukwenza okungalunganga kuya kubeka impilo yezilwanyana emngciphekweni.
Iinwele zabo zibrashiwe kabini ngemini ngexesha lokuphalaza, kwaye kube kanye ngemini unyaka wonke. Ibhrashi eqinileyo inokusetyenziselwa le nto, kunye Ifayile, Eziza kususa zonke iinwele ezifileyo.
Kanye ngeveki iindlebe kufuneka zicocwe nge-gauze ecocekileyo (enye kwindlebe nganye) ifakwe emanzini afudumeleyo, ngaphandle kokungena nzulu.
Kabini okanye kathathu ngeveki amehlo kufuneka acocwe nge-gauze ecocekileyo (inye iliso ngalinye), ifakwe ukumiliselwa kwe-chamomile. Ngale ndlela, ukongeza ekucoceni, umngcipheko wosulelo uya kuncitshiswa.
Nangona uza kuchitha iiyure ezili-16 ukuya kwezili-18 ulele, xa uvukile uya kufuna ukudlala, ukuhamba, ukubaleka. Ayisiyonto uyifunayo ukuze uhlale ulungile, kodwa kubalulekile ukuba uyenze ukunciphisa umngcipheko wokudakumba.
Ngesi sizathu, Yonke imihla kufuneka uchithe ixesha yonke imihla kwaye udlale ngayo, usebenzisa nayiphi na ikati yokudlala enokufumaneka kwiivenkile zezilwanyana, ezinje ngezilwanyana ezifakiweyo, iibhola okanye iintonga.
Ingabonakala isengqiqweni, kodwa ndiye ndacinga ukuba kufanelekile ukuyongeza kuba ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba isilwanyana sifunyanwe, kule meko siyikati, emva koko asihoywa. Kubaluleke kakhulu ukuba Phambi kokuthatha isigqibo sokuzisa ikhaya elinoboya, thetha nosapho ukuze iingxaki zingaveli kamva, kungenjalo ukuhlala kunye ngekhe kube mnandi nakubani na, okona kuncinci kwikati.
Esinye isihloko endingathanda ukuthetha ngaso kukutyelela. Ukuba siyishiya ikati itshixiwe egumbini xa umntu esiza kusibona, ekuphela kwento esiya kuyiphumeza kukuba iyabaphazamisa abantu. Ke, kufuneka ube nathi kangangoko kunokwenzeka ukuze uhlale ukhuthazeka kwaye wonwabile.
IMaine Coon ngokubanzi luhlobo olusempilweni. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba umse kugqirha wezilwanyana ukuze afumane izitofu eziyimfuneko, neutering okanye ukuchitheka kuye kubudala beenyanga ezi-5 ukuya kwezi-6, kwaye uthathe ukuba zijongwe rhoqo njengoko kunguhlobo olunokuba nalo inyonga dysplasia.
Ixabisa malini i-Maine Coon?
Ngaba ungathanda ukuhlala neMaine Coon? Esi 'sigebenga' sithandekayo sisilwanyana esingathandabuzi ukuba sisebenzise ixesha lokuhlekisa, kunye nezinye ithenda. Kodwa kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba ixabiso limalunga 900 euro ukuba ucwangcisa ukuyifumana kwindawo yokutsala.
Ukuba ufuna ukubona ezinye iifoto zeMaine Coon, nantsi:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Maine Coon
Ukuziphatha komntu ofikisayo kwinqanaba lokufikisa
Ikati yam ayizukuphululwa, ngoba?